Smartwatches kacha mma nke China nke Septemba 2021 | Androidsis
Jose Alfocea | | China gam akporo, smartwatch
You na-eche megharia ihe nlele ochie gi n'ihi na onye nwere mma atụmatụ na a ọzọ oge a na mma imewe ma ị na-achọghị ka araparawo gị n'akpa uwe? You nwere mmasị n'echiche nke inwe smartwatch mana ị kabeghị nkwenye siri ike na ị ga-enweta nke kacha mma na ya ị chọghị itinye ego buru ibu na ahụmahụ? Ọ bụrụ n’ịchọta onwe gị n’ime otu n’ime ọnọdụ abụọ ndị a, mgbe ahụ ị bịaruola ebe kachasị adaba.
Taa na Androidsis anyị na-ewetara gị nkwupụta na ụfọdụ n'ime ihe kacha mma China smartwatches. Ee, amaara m na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke elekere amamịghe, ekwentị mkpanaaka na ngwaọrụ ndị ọzọ eji teknụzụ bụ arụpụta ndị China (ma ọ bụ nke ọwụwa anyanwụ), mana ebe a anyị na-ezo aka smartwatches ndị China mere na China ma na-ere ahịa site na ụdị si China. Ọzọkwa, dịka i nwere ike iche n'echiche, ọ bụ maka smartwatch dịtụ ọnụ ala karịa na mbụ,, ọ bụ ezie na agwalarị m gị na anyị agaghị eduzi anyị nke ukwuu site na ọnụahịa. You chọrọ ịma ụdị ndị anyị na-ekwu maka ha? Ọfọn, na-agụ.
1 China smartwatches niile maka mmefu ego
1.7 Uwe ejiji KW88
1.8 Mgbapu R11
1.9 Uzo KW18
China smartwatches niile maka mmefu ego
Smartwatch, 1.69 "Lelee ...
AKW SmartKWỌ Smartwatch, ...
Ebube Bip S Lite ...
ECG Smartwatch, Nyochaa ...
NAIXUES Smartwatch Nwanyị, ...
Na Androidsis anyị nọgidere na-ekpebisi ike igosi gị ngwaahịa kachasị mma na ahịa yana, karịa ihe niile, ndị nwere uru dị mma maka ego ma ọ bụ, dịka ọ dị na nke a, smartwatches ndị China nke na-adịkarị ọnụ ala. O doro anya na ndị a bụ naanị amụma n'ihi na, dịka ị nwere ike iche n'echiche, anyị amaghị kpamkpam ụdị niile dị na ahịa. Tụkwasị na nke ahụ, kwa ọnwa, a na-ewepụta ụdị ọhụụ ọhụụ, mmelite nke elele ndị adịlarị na ahịa ahụ, ọbụnakwa ụdị ọhụụ ọhụụ na, ọbụnadị ịraraghị otu narị pasent nke oge anyị, anyị nwere ike inyocha, nwalee ma nyochaa. Ya mere, taa anyị na-enye gị nhọrọ nke ihe kacha mma China smartwatches Dabere na njirisi dị ka atụmatụ ha, ihe eji arụ ha, nguzogide ha na nnwere onwe ha, ihe mmetụta na, n'ikpeazụ, akụkụ ọrụ aka nke bụ ezigbo ebumnuche iji chọpụta ma ọ bụrụ na ụfọdụ smartwatch nwere ike ịba anyị mkpa anyị, ebe a anyị na-egosi gị otu c. iheonfigure chinese smartwatch ya mere ị gaghị enwe nsogbu ozugbo ị nwetara ya. Yabụ, na-ebutụbeghị, ka anyị bido.
O nwere ike ọ gaghị ada gị oke, agbanyeghị nke a No.1 D5 + es otu n'ime nhọrọ kachasị mma maka uru maka ego na ị nwere ike ịchọta n'ahịa dị ugbu a na, nke kachasị mkpa, ndị jiri ya kpọrọ ihe nke ukwuu.
No.1 D5 + nwere atụmatụ mara mma ma nke na-adịghị mma, ígwè ahụ yana ihuenyo IPS nke anụ ọhịa 1,3-anụ ọhịa na mkpebi 360 x 360. N'ime ya nwere Mediatek MTK6580 processor yana 1 GB nke RAM ebe nchekwa na 8 GB nke nchekwa n'ime. Naanị gram 78, ga-ezu iji gụnye a 450 mAh batrị Na nke ị nwere ike ịdịru ụbọchị dum ọ bụ ezie, n'ezie, nke ahụ ga-adabere n'ụzọ dị ukwuu na ojiji i nyere elekere gị nke ka ukwuu ma ọ bụ nke pekarịrị. Uzo ozo di itunanya bu na o gunyere oghere kaadi SIM, ya bu, o n’enye ya Njikọ 3G ya mere ị nwere ike iji ya ọbụlagodi na ama gị na-anọ n'ụlọ. GPS, ihe mmetụta obi bụ ụfọdụ n'ime ihe mejupụtara nke a smartwatch nke, na mgbakwunye, bụ ájá na mmiri na-eguzogide ọgwụ.
O nwere ike ịbụ na ụfọdụ n'ime unu na-eche na m gbara No1 D5 + mana n'ezie, ọ bụ otu n'ime ezigbo smartwatches China, ọ bụ ezie na ọ bụghị ọnụ ala. Iji chefuo, anyị ga-eme ihe itu ukwu ahụ n'ụzọ dị ọnụ ala karịa mana nke ezigbo mma NeeCoo V3, a smart nche na a mara ezigbo mma dakọtara na ngwaọrụ gam akporo na iPhone, nke ejiri ọla (magnesium na alloy alloy) mee ya na eriri akpụkpọ anụ yana ihuenyo IPS nke 1,3-inch nwere mkpebi 240 x 240, Bluetooth 4.0, 380 mAh batrị. Ọ dị naanị gram 64 ma ọ bụ ezie na ọ naghị egbochi mmiri, ọ nwere ọnụahịa ezi uche dị na ya nke na-erughị euro iri asaa. Na ya ị nwere ike nyochaa mmega ahụ gị niile, nata ọkwa na ọtụtụ ndị ọzọ.
Nhọrọ ọzọ dị egwu, ọkachasị maka ndị nwere obi abụọ banyere ịnwe ma ọ bụ na ịnweghị elekere anya na ndị nwekwara oke ego, ọ bụ nke a Nnukwu kedu ihe ị ga-enweta maka naanị 25 euro. Ọdịdị ya na Apple Watch pụtara ìhè na ọ bụ ezie na ọ nwetaghị ogo na arụmọrụ nke ahụ, ọ nwere atụmatụ dịka ihe na-adọrọ mmasị. mobile Njikọta. Ee, enwere ike iji MallTEK a na kaadi SIM, na-ahapụ ama ama, mana ọ na-enyekwa ihuenyo 1,54-inch na mkpebi 240 x 240, 380 mAh batrị, igwefoto na naanị kilogram 62. Want chọrọ ịbanye ụwa nke smartwatch? Ọfọn, nke a bụ nhọrọ dị mma ị nwere dị na ngwụcha atọ, ọlaọcha, oji na pink.
Mana ọ bụrụ na ọ masịrị gị ịmebe elekere apụl ma ị dị njikere imefu ihe ndị Cupertino rịọrọ, nke a Iwo 3 ee, ọ bụ ezi mmepụta oyiri nke Apple Watch, gụnyere Digital Crown ahụ n'akụkụ. Ọ dakọtara na ma iOS na gam akporo smartphones ma nwee ihuenyo IPS nke 1,54 nke anụ ọhịa na mkpebi 240 x 240. N'ime ya nwere ihe nhazi MediaTek MTK2502C tinyere 138 MB nke RAM, 64 MB nke nchekwa na batrị. 350 mAh. O doro anya na ọ dị ntakịrị na ngwaike na ngwanrọ na Apple Watch, mana ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na-atụle ọnụahịa ya. Anyị na-ekwusi ike, nke a bụ smartwatch China nke kachasị mma maka ndị na-achọ nhazi karịa arụmọrụ ọ bụ ezie na ịnwekwara ike soro mmega ahụ gị ma nata ọkwa.
Ihe zuru oke bu nke a nke ozo nke ozo n’ime apụl elekere nke gụnyere igwefoto na mkpanaka njikọta ya mere ị nwere ike ịga n'ihu iji ya ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnweghị ama gị dị nso. Ọ bụ ihe dị obere mara Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. nke, nwere ọnụ ahịa nke naanị euro iri asaa, na-enye, na mgbakwunye na ihe ndị a kpọtụrụ aha, ihuenyo 1,54S nke anụ ọhịa ahụ 2.5 IPS na mkpebi nke 240 x 240, 320 mAh batrị, Bluetooth 4.0, Mediatek MTK2502 processor na dakọtara na ma iPhone na gam akporo smartphones.
Ugbu a, anyị na-atụgharị uche maka smartwatches abụọ nke China nke nwere ike ọ gaghị adị ọnụ ala dị ka nke gara aga mana nke ahụ doro anya bụ ihe atụ abụọ doro anya nke smartwatches China kachasị mma na, n'eziokwu, anyị ekwuolarị maka ha n'oge ụfọdụ.
Anyị na-amalite na nke a LEMFO LEM5, elekere nke siri ike anya na okirikiri imewe nwere bọtịnụ atọ n'akụkụ nke na-echetara anyị ọtụtụ nche ndị ahụ nke ndụ. Ọ na-enye ihuenyo IPS 1,39 nke anụ ọhịa na 400 x 400 mkpebi mgbe ọ dị n'obi ya ọ na-echekwa ihe nhazi Mediatek MTK6580 tinyere 1 GB nke Ram na 8 GB nke nchekwa esịtidem otú i nwere ike mgbe niile na-ebu ezigbo ego nke music na ị. Ọ bụ naanị 89 gram, zuru iji nye a 450 mAh batrị y Njikọ 3G n'ihi ya, i nwere ike iji ya na mpụga nke ekwentị gị. Ọ gunyere GPS, ihe mmetụta ụda obi, wdg. N'ụzọ doro anya, ọ bụ elele nke ogo na arụmọrụ dị elu karịa nke gara aga, karịa na akara nke No.1 D5 + nke anyị ji bido nhọrọ a ma yabụ, ọnụahịa ya dịkwa elu.
N'otu akara dị ka nke gara aga anyị hụrụ nke a Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. Otú ọ dị, ihe nlereanya a dị ntakịrị karịa na Lemfo Lem5 ebe ọ bụ na ọ nwere ọkara ọkara RAM na nchekwa dị n'ime, 512 MB na 4 GB karị. Ọ na-enyekwa obere ọchịchị obodo, 400 mAh batrị ma na ihu ọma ya o nwere a Igwefoto 2 MP na ibu nke naanị gram 65 nke na-eme ka ọ dịtụ mfe. Nhazi ahụ bụ otu ihe ahụ, Mediatek MTK6580 na o nwekwara mobile Njikọta.
Ọ bụrụ na mgbakwunye na ịba uru ị na-achọ ịdị mma, nke a Mgbapu R11 Nwere ike iyi ya na agbamakwụkwọ na nzukọ na-enweghị inye mgbawa ahụ. Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọ na-enye a nnọọ nlezianya imewe, na ezi kpochapụwo na mara udi na eriri. Ọ na-adịtụ ka Moto 360 ma gụnye njirimara ole na ole nke ga-ezuru ọtụtụ ndị ọrụ. N'ime ya nwere Mediatek MTK2501 processor, 128 MB nke RAM, 64 MB nke ROM na nkwado maka microSD ruo 32 GB, NFC, Bluetooth 3.0 connectivity, batrị 450 mAh, ihe mmetụta obi na-adaba na iPhone yana gam akporo N'ezie, kpachara anya n'ihi na ọ B NOTGHproof mmiri na-adịghị.
Ekwenyesiri m ike na elekere a adịghị ka ihe ọ bụla nye gị, agbanyeghị na ọ nwere atụmatụ m hụrụ n'anya (ọkachasị na oji) yana ọnụahịa karịrị ọnụ, ihe karịrị euro iri ise. Ọ gbasara Uzo KW18, China smartwatch gbara gburugburu nke naanị kilogram 68, nke atọ mechara, ihuenyo 1,3-inch, Mediatek MTK2502 processor esonyere 64 MB nke RAM, Bluetooth 4.0, 340 mAh batrị, ihe mmetụta obi ọnụego, dakọtara na iOS yana gam akporo, waterproof, mobile Njikọta, na-akwado kaadi microSD.
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị na mgbe anyị na-ekwu maka smartwatches ndị China (ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla ọzọ nke China), anyị na-echekarị na anyị na-eche maka ngwaahịa dị ọnụ ala na nke adịghị mma, agbanyeghị, dị ka anyị hụworo, nke a bụ nkwenkwe a ma ama karịa eziokwu. Ọ bụ eziokwu na smartwatches ndị China na-adịkarị ọnụ ala, ọnụahịa na agwa dịkwa oke obosara Ya mere, isi ihe dị na ịmara ihe anyị ga-eji elekere anya anyị, ma ọ bụrụ na anyị ga-enye ya kpụ ọkụ n'ọnụ kwa ụbọchị, ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ọ rụọ ọrụ n'adabereghị na ekwentị anyị, wdg.
Ihe smartwatch nke China ị ga-agbakwunye na listi ahụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Best smartwatches China
Aga m agbakwunye bizift bip na ijeụkwụ nke bụ elele egwuregwu ma nwee ọnụ ahịa dị mma na GPS
Ebeekwa ka Domino DM368 gbakwunyere? ma ọ bụ Finow X5 AIR? ...
Isiokwu a enweghị ntakịrị nyocha.
KW18 edeputara abụghị nke mbụ, ọ bụ KingWear k1w8
Lemfo kW 10, Ọ ga-amasị m inwe ike ịgbanwe ha ma ọ bụ ị nwere ike? M na-ajụ?
mmụọ ozi nke ndagwurugwu dijo
Ana m achọ SmartWatch, na-abụghị APPLE…. na ECG -Electrocardiogram- (nyochara nke ọma) Amaara m na Xiaomi nwere otu ọrụ a dị ka Samsung ...
Daalụ maka ọmarịcha ibe gị.
Zaghachi angel del valle
Nwere ike 4G Smartwatch nwere kaadị SIM "nye ịntanetị" dịka ọmụmaatụ kọmpụta dịka Mac mini site na Wi-Fi?.
Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na iji 4G Smartwatch nwere kaadị SIM, ịnwere ike ime otu ihe ahụ dị ka iji ekwentị.
Jay Y. Lee, osote onye isi Samsung, tụrụ mkpọrọ afọ 5
Ihe Google Pixel 2 nwere ugbua ubochi eweputara ya na Snapdragon 836